webadmin – MGL Express
By webadmin Uncategorized Comments: no comments
December 6, 2018 Magnate Group Logistics Co., Ltd (hereinafter referred to as “MGL”) is an official agent of OCS in Myanmar. Any and all mentions of OCS below shall refer to as “MGL” in the territory of Myanmar. Basic Policy Built onafoundation...
By webadmin Career, Uncategorized Comments: no comments
We arealegally licensed Express Courier Service whose operating license issued by the government and relevant ministry.We are also the most management experienced local express courier company.Our board of directors includes former heads of departments from international air express & logistics companies. Currently,...
Express mails/Parcels Services အမြန်ချောစာ၊ ချောထုပ် ပစ္စည်းများကို မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမြို့ကြီးများသို့ အပြန်အလှန် ယနေ့ပို မနက်ဖြန်ရောက် စနစ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာမြို့တွင်းသို့ နေ့ချင်းရောက် စနစ်ဖြင့်လည်းကောင်း လိုအပ်ချက်များအလိုက် အဆင်ပြေစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဖုန်းဆက်ခေါ်ရုံဖြင့် အမြန်ဆုံး လာရောက်သိမ်းဆည်းသယ်ယူပေးပြီး လိပ်စာရှင်ထံ သွားရောက်ပေးပို့ပါသည်။ Please fill out the following form with your message. We will review your request and follow up with you as soon...
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူများဦးစီး၍ သွက်လက်ရည်မွန်သော၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀န်းထမ်းများဖြင့် အကောင်းဆုံးနှင့် အဆင်ပြေဆုံး လူကြီးမင်းတို့၏ စာနှင့် ပစ္စည်းများကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ဂျပန်၊ ဟောင်ကောင်၊ စင်ကာပူနှင့် အခြားသောနိုင်ငံများသို့ အပြန်အလှန် လိပ်စာအရောက် (Door to Door) စနစ်ဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ International Rates and International Tariff Guide ဖုန်းဆက်ရုံဖြင့် အမြန်ဆုံးလာရောက်သိမ်းဆည်း/ သယ်ယူပေးခြင်း။ ပေးပို့လိုသော လိပ်စာရှင်ထံသို့ သွားရောက်ပို့ပေးခြင်း။ ပေးဝေပြီးကြောင်းကို Customers များသို့ အကြောင်းပြန်ကြားပေးခြင်း။ အထူးမှာကြားချက် (သို့) သတ်မှတ်ချက်ရှိသော အချိန် (သို့) ပုံမှန်သတ်မှတ်ချက် အချိန်အတိုင်းလာရောက်...